Chili : Horohorontany mahatratra 8,8 refy Richter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2010 19:25 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Français, русский, Swahili, Português, srpski, বাংলা, English
Horohorontany manana herim-pihetsehana 8,8 amin'ny refy Richter no nandona ny faritr'i Maule tamin'ny 3:34 maraina tany an-toerana any Chili io. Heno hatrany an-drenivohitra Santiago izay 325km miala ny ivony ny hetsiky ny tany. Betsaka ny fahasimbana manerana ny firenena, ary mitombo isa araka izany ihany koa ny niharam-boina. Mbola re matetika moa ny setriny nandritra ny tontolo andro tany amin'iny faritra iny.
Haingana dia haingana ny nananganan'i Francisco bolongana antsoina hoe Terremoto Chile [es] (Horohorontany Chili) vantany vao nisy ny horohorontany. Ankoatra ny namoahany ny fepetra tokony horaisin'ny olona rehefa misy ny horohorontany [es], dia nanangona sary sy rohy maro tamin'ny Twitpic ihany koa izy.
Eo akaikin'ny ivony i Robinson Esparza avy amin'ny gazety El aMaule [es], anisan'ny orinasa Diarios Ciudadanos [es] no mamoaka ny vaovao isam-paritra sy anatin'ny firenena farany[es]. Maro amin'ny famoahan-kevitra no ahitana ny ahiahin'ny fianakaviana monina any ivelan'ny renivohitra, ary mbola nitohy izany tsy fandrenesam-baovao izany ho an'ireo mitady fianakaviana na namana izay misy fahatapahana ny herinjiro sy ny taribin'ny sofindavitra. Ny nosoratan'i Ign. Rodríguez de R. (@micronauta) tamin'ny levilevy tao anatiny:
Nanangana kaonty Twitter antsoina hoe Ayuda Chile [es] (Ampio i Chili) ireo mpamoaka vaovao ao amin'ny bolongana Terremoto Chile ka ao no angonina ny vaovao avy amin'ny mpampiasa Twitter hafa mitady fianakaviana ary dia ampiasaina ihany koa ny re-tweeted (mamerina ny sioka an-tserasera ho an'ny mpanaraka). Misy moa ny mpampiasa Twitter sasay tahaka an'i Pablo González Carcey no manolotena hiantso ny olo-pantatr'ireo [es] olona tahaka an'i Daniela Alvarado izay tsy mety mahazo an'antso ny anadahiny any Chili. Hoy izy:
Vao nipoaka ny andro dia maromaro avy hatrany ny sary an-serasera nivoaka. Nivezivezy nanerana an'i Santiago i Claudio Olivares hijery ny fiantraikan'ny voina ka namoaka ny sary tao amin'ny Owly, tahaka ny nataon'i Costanza Campos izay naka saripika ny fahasimban'ny fiangonana ao Santiago.
Naka ity lahatsary manaraka ahitana ny fidabohan'ny lavarangana amin'ny tilikambon'i Bilbao any Las Condes manodidina an'i Santiago ity ny mpampiasa YouTube Franciso Vivallo Sainz:
Efa misy sahady moa ny fanairana mety hisian'ny tsunami navoakan'ny Ivotoerana mpamantatra ny mety hisian'ny tsunami any amin'ny babandranomasin'i (Oseana) Pasifika.